Gantaal ay tijaabisay Kuuriyada Waqooyi oo ku dhacay meel u dhow biyaha Japan – The Voice of Northeastern Kenya
Gantaal ay tijaabisay Kuuriyada Waqooyi oo ku dhacay meel u dhow biyaha Japan
Saraakiisha dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo Japan ayaa sheegay in gantaal ridada dhexe ah oo ay tijaabo ahaan u rideen ciidamada Kuuriyada Waqooyi uu ku dhacay meel aan sidaas uga fogeyn biyaha wadanka Japan.
Gantaalkaasi ayaa ah kii ugu dmabeeyay ee nooca balaastiga ah oo ay tijaabiyo xukuumadda Piongyang, iyadoo loo adeegsan karo in uu xambaaro qumbuladaha hubka wax gumaada ee Nuclierka.
Labada dowladood ee Japan iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa si wada jir ah u sheegay in Gantaalkaan oo la tuhunsanyahay in uu yahay nooca casriga ah ee loo yaqaanno Rodong, saacadihii hore ee maanta oo arbaca ah laga riday saldhig ku yaalla gobolka Hwanghae ee galbeedka dalka Kuuriyada Waqooyi.
Wasaaradda gaashaan dhiga ee dalka Japan ayaa sheegtay in gantaalka laga tuuray Kuuriyada Waqooyi uu ku dhacay gudaha biyaha biyaha gaarka u ah Japan, gaar ahaan meel 200 oo mile u jirta biyaha ay Japan u adeegsado dhinaca ganacsiga isla markaana ay kheyraad fara badan oo dabiici ah ugu jiraan.
Waaxda Istiraatiijiyadda ee dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in Kuuriyada waqooyi ay caadeysatay in ay si joogto ah u tijaabiso gantaallada noocoodu yahay Rodong oo ay mamnuuc tahay ridistooda.
Tallaabadaan ugu dambeysay ee ay qaadeen Milatariga North Korea ayaa timid saacado yar kadib markii ay Mareykanka ka digeen tijaabinta gantaallo hor leh oo ay sameyso Kuuriyada Waqooyi.
← Faahfaahin kasoo baxeysa dab xalay ka kacay xaafada Kibera
Madaxda gudiga IEBC oo sheegay in ay diyaar u yihiin is casilaad →